एउटै खुट्टाले कल चलाउँदै पिएलए सेक्सन कमाण्डर | Indrenionline.com
एउटै खुट्टाले कल चलाउँदै पिएलए सेक्सन कमाण्डर
घोराही, ३० असार । मुख मिठ्यादैको उज्यालो मुहारमा भेटिन्छन् । मिजासीलो बचनका साथ हात मिलाउन आउछन् । जस्तै कठिन परिस्थीतिमा पनि जनता संग गर्ने सरल व्यवहार जनयुद्धमा कमाएको विचारको परिणाम हो, पुर्व जनमुक्तिसेना नेपालका सेक्सन कमाण्डर गंगा बहादुर विक ( क. ज्वालामुखि ) को ।
शसस्त्र जनयुद्ध सकिएको दश बर्ष नाघि सक्दा योद्धाहरुको आपसी आरोप प्रत्यारोपको भिषण लडाई चलिरहेको छ । शान्ति सम्झौता भएको मिति बिर्सीदै गर्दा त्यसका योद्धाहरुको लडाई चर्कीदो छ । संसोधनबादि, पलाएन, धोकेवाज, पतन के के हुन शब्द खोजेर गालि गलैच बढिरहेको छ । युद्धपछि शान्तिमा आएका क ज्वालामुखि भने कल चलाएर सिलाई कटाई पेशामा लाग्नुभएको छ । कसै प्रति असन्तुष्टि, आग्रह पुर्वाग्रह न साचेर कर्मको फल खान पेशामा अबद्ध भएको बताउनुहुन्छ । ‘कसै प्रति रिस राग छैन, छैन, छैन’ भन्दै विकले फड्कार्नुभयो, उहाले थप्नुभयो, ‘परिथितिले यो स्थानमा ल्यायो । कोहि प्रति गुणाासो गरेर फाईदा छैन ।’
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी आक्रमणमा क ज्वालामुखिको एउटा खुट्टा गुमेको थियो । पुर्ण कालिन कार्यकर्ता भएर २०५७ सालमा ज्वालामुखिले घर त्याग्नुभयो । उसवेलाका सपना, लक्ष्य उद्देश्य यति सम्म फरक थिए कि फेरी यहि पेशामा फर्किने कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो । नया संसार निर्माण गर्ने भनियो त्यो कस्तो हो खाका भने थिएन । क्रान्ति पछिको सुन्दर संसार भन्ने भ्रम मात्रै फिजिन्थ्यो । केहि समय क्षेत्रीय सिलाई कटाईमा काम को जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो । पार्टिले जुन मोर्चामा खटाउछ त्यहि अडिग र अटल भएर उभिनु पर्दथ्यो । त्यस पछि सेनामा पठायो ।
पार्टी क्रान्ति उहि हो । व्यक्तीगत ईच्छा आकांक्षा मात्रै फरक हुदै गएका छन् । त्यसैलाई नया विचार मानेर बढ्न खोजेको मात्रै हो । अहिलेको परिस्थिति हास खेल गरेर आएको ठान्नु निकै ठुलो भूल हो । युद्धकालमा सबै प्रति विश्वास थियो । कोहि कसैप्रति संका हुदैन्थ्यो । अहिले लोभी पापिको संसारमा प्रबेश भएको छ । उहाले भन्नुभयो, ‘पार्टि टुक्रिएर भाई भाई फुटेको बेठीक हो ।’ ज्वालामुखिले पार्टि त्याग्नेहरु प्रति संकेत गर्दै थप्नुभयो, ‘भाई फुट्दा आमा बाबुको दिल दुखि हाल्छ नि ?’ उहाका अनुसार दोश्रो संविधान सभाहुदै अहिलेको साईजमा खुम्चिनु फुटकै कारणले हो । एकता बद्धा पार्टि भए अझै विसौ बर्षा शासन गर्ने क्रान्तिकारी शक्ति बन्थ्यो । उहाले भन्नुभयो ‘विकसीत परिस्थतिमा ईच्छा पुरा हुन सकेनन् भनेर पछुताउनु छैन’ क जवालामुखिले थप्नुभयो, ‘देशमा शान्ति भयो यहि राम्रो ।’
युद्ध नरोकिएको भए यसै हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । ज्वालामुखि भन्नुहुन्छ सत्ता कब्जा हुन सक्थ्यो तर घाईत अपाङग पनि कति हुन्थे अनुमान गर्न सकिन्न । सम्झौताले देशमा शान्ति भयो । सबैको चाहनाअनुसार त्यहि राम्रो । जनयुद्धका शहिद व्यपत्ता घाईते धेरै असन्तुष्टि छन् तिनलाई पनि शान्ती भएकाले मन बुझाउने ठाउ भएको छ । उनिहरु राहत पाएका छन् । सत्यनिरुपन मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उतिवेलाको परिस्थिति सम्झिदै भन्नुभयो, ‘उसबेला युद्धमा लागिरहन्छु । लडाई गरीरहन्कछु भन्ने थियो । यहा आउछु । यस्तोकाम गर्छु भन्ने आशंकै थिएन ।’ उहाले पिडा पोख्दै थप्नुभयो, ‘यस्तौ अपाङग हुन्छ ुभन्ने त ..?’ बोलि रोक्नुभयो, अघि बढ्न सकनु भएन । पिडा महशुस गरेको अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । साथिहरु पुर्व पश्चिम कता कता छन् । उनिहरु संग भेटै हुन्न । जुन बेला उनिहरुनै संसार थिए । सर्बश्व मानिन्थ्यो । तिनै संग देख भेटै हुदैन । त्यो सहनु पनि परिवर्तन हो ।
अहिले पनि माओवादिहरु एकता भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । माओवादि केन्द्रमै रहेका बताउने ज्वालामुखिलाई विश्वास भने छैन । ‘त्यसतो मिलेको राम्रो त हो तर मिल्न का“ सक्छन्न र ?’ उहाले थप्नुभयो ‘उले मेरो राम्रो अर्कोले मेरो राम्रो भन्छ । पहिला नेताहरुले गलत कुरा भने । अहिले बुझेर के अर्थ ?’ उहाका अनुसार आफ्नै मान्छे दुश्मन भएका छन् । एक अर्काको काम विगार्नेहो भने टुक्रिएका माओवादिनै पहिलो पक्तीमा आउछन् । यो नै दुखद कुरा हो । पार्टि संग भावना टुक्रिएको छ । यो नजोडिनु दुर्भाग्य हो ।
घाईतेको बर्गिकरणमा चित्त बुझेको छैन । उस्तै उस्तै घाईतेलाई फरक बर्गिकरण गरेको प्रति दुख व्यक्त गर्नुभयो । को कति पिडित छ ? घाईते को अबस्था कस्तो हो ? कसको कति योगदान गरेको छ ? जस्ता कुराहरु लागु नभएको बताउनु हुन्छ । ‘हेरेर घाउ र अबस्थाका आधारमा परिचय पत्र दिएको छैन’ उहाले थप्नुभयो, ‘उस्तै घाईतेलाई विशिष्ट उहिलाई आजिवन अर्कोलाई ख श्रेणिमा राखेर विभेद भएको छ ।’ उहाले पार्टिले यसमा पहल गरेर सुधार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यसरी सिलाई कटाई पेशामा लागेको दुई बर्ष बढि भयो । यस अबधिमा ज्वालामुखिले अरु सिलाईकटाई उद्योगमा पनि काम गर्नुभयो । दुईचार महिना उता बरालीएपनि राजसटिङ सुटिङ एण्ड टेलरिङमै आफुलाइ फिट खाएको महशुस भएको छ । मंगलसेन थर्ड बटालिएनमा जिम्मेवारी पाएका ज्वालामुखि ग्लानी महशुस गर्नुभएको छैन । पाच जनाको परिवार संरक्षण गर्न एउटै खट्टाले कमाई गर्ने क ज्वालामुखि खुशि देखिनु हुन्छ । दलित मोर्चा बाट आन्दोलनको शुरुवात गर्नुभएको हो । घोराही सरर्रामा बस्दै आएका ज्वालामुखि रोल्पाको मिरुल बाट झर्नुभएको थियो । यसरी नया स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुलाई पनि उपलब्धी ठान्नु पर्ने उहाको मत छ । पुर्व जनमुक्ति सेना भएपनि प्रमाणिकरणमा छुट्नुभयो । उपचार बाट घर फर्किदा प्रमाणिकरण भई सकेको थियो । पार्टीको पहलमा सरकार बाट एक लाख पाउनुभयो । उतिबेला हतियार चलाएका ज्वालामुखि अहिले कल चलाउदा पनि पस्स्थिितिले सिर्जेको भनेर खुशि हुनु हुन्छ ।
३० असार २०७४, शुक्रबार ०६:२३
Previous: २ नम्वर प्रदेशमा पनि एमाले पहिलो हुन्छ पहारी
Next: प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार – गृहमन्त्री
४ श्रावण २०७८, सोमबार ०९:३७